Top 10 video caanka ah websites qaybsiga dib u eegis
> Resource > Video > Top 10 Popular Video Sharing Shabakadaha Review
1. YouTube - warbaahinta Naftaada
YouTube waa hab si aad u hesho videos dadka ahan in aad. Upload, tag oo la wadaagno videos dunida oo dhan!
Marka aad ka fikirayso websites video qaybsiga , YouTube yimaado si aad maskaxdaada si dabiici ah. Inkastoo YouTube ma ahaa video qaybsiga goobta hore, waxa uu hore u noqon video qaybsiga goobta ugu wanaagsan ee isku darka xariif ah oo macquul ah oo bulshada ka shaqeynayaan.
YouTube waa caan ah oo aduunka oo dhan, ma aha oo kaliya in America. Waqtigan xaadirka ah, YouTube ahaa u dhanyihiin ku dhawaad ​​20 boqolkiiba dhammaan gaadiidka caalamiga ah ee internet-ka. Its caan ka mid tahay oo kaliya wax fikrad ah in YouTube waa video qaybsiga website ugu fiican halkaas.
Talo: Haddii aad rabto in aad kala soo bixi videos ka YouTube ama mid ka mid ah website-yada ka dib markii sida Hulu, Dailymotion, Metacafe, Megavideo oo dheeraad ah, fadlan ka Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) caawimaad. Waxaa kuu saamaxayaa inaad soo bixi videos kaliya click ah. Ma aha oo keliya downloader ah, laakiin sidoo kale ah Converter, ciyaaryahanka iyo tababaraha video. Isku day oo Marna aad hoos ku dayn doonaa.
2. Hulu - fiiri ugu cadcad. Markasta. Wixii lacag la'aan ah.
Hulu kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho aad jeceshahay muujinaya TV iyo filimada oo aan u daawado ee aad firaaqada ah, inta la bixiyey oo dhan kala duwan oo sifooyinka dhigo mid suurto gal ah in aad waayo-aragnimo u astaysto daawashada habka kaliya aad u jeclahay. Hulu waxaa loogu tala galay in lagugu siiyo waxa aad rabto in aad sida aad u rabto in aad; maxaa dheeraad ah oo aad weydiisan kartaa bogga internetka ah video shareing?
Hulu uusan haysan wax walba. Laakiin waxa aanu wax badan ka badan waxaadna ka filaneysaa in la helo. Wax macno ah ma nooca muujinaysaa inaad xiisaynayso in; Hulu mar walba wax kuu for. Taasi waa sababta ay sida khayraadka madadaalo weyn.
3. Dailymotion - Online Videos, Music, iyo Movies. Daawo Video ah oo Maanta!
Dailymotion soo jiidata dadka isticmaala adduunka oo dhan ka ah - tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo kala duwan websites video share on internetka. Inta badan videos ku Dailymotion waxa ay noqon more xirfadeed ee dabiiciga ah. Waxay leeyihiin newscasts, commercials iyo filimo gaagaaban.
Tani goobta video qaybsiga talagalay dhagaystayaasha iyo bixisaa badan oo ka mid ah qaababka dhagaystayaasha la xiriira. Waxaad ka raadin kartaa videos la sanduuqa raadinta ama caleenta qaybaha badan si aad u hesho jecel videos aad. Oo dadkii oo dhammu ka mid ah filimada ugu leeyihiin Falanqeynta sawirka.
4. Metacafe - Online Video Entertainment - Free video clips Sid aad u
Metacafe qaadataa waayo-aragnimo user si aad u daran; waxay bixisaa videos tayada iyo nidaamka u gaar ah dib u eegis ku hayaa in content ilaa heer sare ah.
Hadda, Metacafe ku salaysan yahay in California, laakiin run ahaantii waxa la qotomiyey Tel Aviv, Israa'iil. In kasta oo ay bilaabeen meel ka baxsan America, waxa uu hore u abuuray socda weyn ee dalka Mareykanka, iskaba daa dalalka kale ugu Ingiriiska ku hadla.
5. MEGAVIDEO - Waxaan Daawasho
MEGAVIDEO waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan video qaybsiga website in aad tagi kartaa la daawado filimka lacag la'aan ah. Waxaad ka arki kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee filimada halkan in ay yihiin oo kaliya baxay ee tiyaatarka. Waxaan leeyahay tons miinshaar ee filimada halkan hore oo ay ka mid yihiin aan jeclaa taas oo ah sheekooyinka Dhacca iyo hurdada. Waxa kale oo aan jeclahay Haa Man ​​iyo Todoba oo ginni oo kuwanu waa kuwa aan arkay dhawaan.
Boggan waxa laga yaabaa in sameeya nooc ka mid ah heshiis la filim ka si ay u sii daayaan baxay shabaqa ama waa la iska leh kara studiyaha sida aan kaliya ma oga, laakiin ilaa iyo inta ay tahay sharci ka dibna waxaan u daawan karin. Inta badan goobahan yihiin kuwo sharci ah ama haddii kale ay ka maqnaan doonaa ganacsiga.
MySpace waa shabakad hogaaminaya caalamka oo bulshada oo bixiya Customization aad profile iyo image internetka.
Waxaa had iyo jeer u eg sanduuqa farshaxan tuuray ilaa shaashadda ka dibna bilaabay ciyaaro music aad looga cabsado igu isagoo isku dayaya inuu ii soo gabagabeyn weyno.
Weli mid ka mid ah baraha bulshada ugu fiican. Ma u bixiyo saaxiibbadiis ah, laakiin music ah. Dhegayso ku dhawaad ​​kasta oo askartii iyo ninkii ogaan heeso cusub.
Saraaxa, Yahoo! Video ma aha meel loogu talo galay dadka caadiga ah si ay boostada videos, waxa kaliya hal ganacsi Rafaa. Ka sokow, runta in ay leeg- tahay daawashada waxay u muuqataa qaabkii iyo ma fudud yahay oo fudud si ay u isticmaalaan, waana arrin sahlan in aad fahamto sababta Yahoo! Video aysan isku dayin in ay sameeyaan waxa ay sare ee dib u eegista. Waa video qaybsiga goobta qabow badan ka kooban, laakiin waxa ay sidoo kale ma laha waxa aad raadinayso ama uu upstaged by internetka ugu sareeya share 5 video in dib u eegista.
8. vimeo, Video Sharing Waayo, waxaad
Vimeo waxaa si deg deg noqday ma aha oo kaliya goobta video share oo caan ah laakiin sidoo kale goob bulshada. Waa arrin meel caadiga ah ee ka gaysashada filim inay muujiyaan videos asalka iyo filimo gaagaaban si dunida kale film-samaynta. Bogga waxaa kaloo ku caan dhawr sida meel ay ku kaydiyaan kuna soo bandhigto shaqadooda xirfadlayaasha.
Break Studios uu leeyahay noocyo kala duwan oo mawduucyo in ay bixiso $ 8 kasta. Inkasta oo qaar badan oo ka mid ah mawduucyada waxaa loo jiheeyo nin, waxaa jira dhowr cuntada, dibadda, ciyaaraha iyo qaybaha movie. Qorayaasha lacag ah oo ku saabsan 1-dii iyo 15-ka mid ah bil kasta PayPal. Waxaad sheegan kartaa ilaa 10 articles ee waqtiga laakiin aan mar dambe sheegan karo ilaa aad safka siidaysay ilaa by isagoo article la ansixiyey. Tani waa mid ka taro in Waxaan rajeynayaa inay dhawaan la beddelo. Waxaan jeclaan lahaa in ay awoodaan in ay qoraan maqaalo baddan marka aan sugayo shuqulladayda sii gudbiyey in la ansixiyo. Aasaasida waa la mid baahida Studios, laakiin muu si sahlan!
10. TV.com - Free Full dhacdooyin & Clips, Show Info iyo TV Listings Guide
TV.com daboolayaa telefishanka iyo diiradda ku saabsan bandhigyada ee luqadda Ingiriiska sameeyey ama baahin ee Maraykanka, Ingiriiska, Canada, Australia, New Zealand, Ireland iyo Japan. Marka laga reebo Hanuuniyaa dhacdo, waxa ku jira waraysi, dib u eegista, war-US u janjeedha, videos, sawiro, liiska TV, forums iyo qaar ka mid ah qaababka kale. In eray, TV.com waa video goobta compositive.